Rosonerri & Raiola oo is raad guraya! – Gool FM
Rosonerri & Raiola oo is raad guraya!
Raage June 6, 2017
(Milano) 06 Juunyo 2017 – AC Milan ayaa door bidaysa in haddiiba ay iibinayaan Gianluigi Donnarumma ay siiyaan Real Madrid halkii ay Mino Raiola u ogolaan lahaayeen inuu laacibka geeyo Manchester United.
Xaaladda ayaa aad u kacsan, jeer uu qandaraaska laacibku dhacayo Juun 2018, tiiyoo aan weli la ansixinin qandaraas kordhin ay Milan laacibka u bandhigtay oo ku kacaya €4m oo euro sanadkii.
Warar iminka soo baxaya ayaa sheegaya in Raiola – oo sidoo kale wakiil u ah Paul Pogba iyo Zlatan Ibrahimovic – uu hindisayo qorshe uu laacib-yarahan ku gaynayo Manchester United.
Sida uu sheegayo khabiirka Telelombardia ee Davide Russo De Cerame, Milan ayaa aarsi ahaan wada xaajood ula gashay wakiilka wayn ee super-agent Jorge Mendes iyp Real Madrid si ay ugu yaraan u fashiliyaan qorshaha Raiola.
Milan ayaa sidoo kale miinka ka cuskatay qorshe uu watey Raiola kaasoo qandaraaska Milan lagula xirayo shuruudo dhowr ah oo isaga u dan ah.
MUUQAAL: Ricardo Rodríguez oo goor dhowayd kasoo degey Milano! ''Waan ku faraxsanahay inaan halkan imaaddo - Forza Milan''
RASMI: Arda Turan oo ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah